डेङ्गुसँगै स्क्रबटाइफस बढ्यो - Rastriya Samachar
डेङ्गुसँगै स्क्रबटाइफस बढ्यो
बिहिवार, २ आश्विन २०७६ १२:१३
काठमाडौँ, असोज २ गते । पछिल्लो समयमा डेङ्गुका साथै स्क्रबटाइफसले पनि मानिस बिरामी पर्न थालेका छन् । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका चिकित्सक डा. शेरबहादुर पुनले स्क्रबटाइफसका कारण ज्वरो आएका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको बताउनुभयो ।उ हाँका अनुसार अहिले औसतमा दैनिक आठ नौ जना स्क्रबटाइफसका बिरामी भेटिने गरेका छन् । डा. पुनले भन्नुभयो, ‘डेङ्गुको आशङ्कामा उपचार गर्न आएकाहरूको जाँच गर्दा स्क्रबटाइफसको सङ्क्रमण देखिएको  ।’ उहाँका अनुसार डेङ्गुका नयाँ बिरामीको फाटफुटबाहेक नियन्त्रण नै भइसकेको छ । डेङ्गुका पुराना बिरामी फलोअपमा आउने क्रम भने बढिरहेको उहाँको भनाइ छ । डा. पुनले स्क्रबटाइफसको छुट्टै परीक्षण टेकु अस्पतालबाहेक अन्य अस्पतालमा खासै नगर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्ला दिनमा यसको सङ्क्रमण बढेकाले सबै अस्पतालले पनि डेङ्गुसँगै स्क्रबटाइफसको पनि परीक्षणमा लाग्नु पर्ने बताउनुभयो । स्क्रबटाइफसको सङ्क्रमण पशुमा लाग्ने किर्ना र मुसाबाट मानिसमा हुने सङ्क्रमण हो । सबाट बढी गाउँबस्ती प्रभावित हुने गर्थे तर अहिले काठमाडौँबासीलाई समेत देखिन थालेको भन्दै उहाँले आश्चार्य व्यक्त गर्नुभयो ।
चिकित्सकका अनुसार ज्वरो आउने, बढी पसिना आउने, टाउको दुख्ने समस्या देखिने भएकाले स्क्रबटाइफसको नियन्त्रणका लागि पाँचदेखि सात दिनसम्म एन्टिबायोटिक नै प्रयोग गर्नुपर्छ, एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्न सुरु गरेको ४८ घण्टा मै ज्वरो नियन्त्रण हुने पनि डा. पुनको भर्ना छ ।
डेङ्गु क्रमशः नियन्त्रणको क्रममा
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले डेङ्गु नियन्त्रणको क्रममा रहेको जनाएको छ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका प्रवक्ता डा. अनुप बास्तोलाले डेङ्गुका बिरामीको सङ्ख्या क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यो साता दैनिक औसतमा ३५० को हारहारिमा मात्रै डेङ्गु परीक्षणका लागि आउने गरेका छन् । अघिल्लो साता औसतमा ६५० जनाको हारहारीमा परीक्षणका लागि आउने गरेका थिए ।
अहिले उपचार गर्न आउनेमध्ये दैनिक चार पाँच जनालाई मात्रै डेङ्गुका सङ्क्रमण देखिने गरेको छ । अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. शेरबहादुर पुनले डेङ्गु भएर परीक्षण गर्दा डेङ्गु देखिएकोमा ७० प्रतिशत बढी पुराना बिरामी रहेको र नयाँ त एकदमै कम रहेको जानकारी दिनुभयो ।